Fahasalamana : 1.500 isan-taona ny Malagasy voan’ny homamiadana | NewsMada
Fahasalamana : 1.500 isan-taona ny Malagasy voan’ny homamiadana
Anisan’ny aretina mandripaka olona betsaka tato anatin’ny 10 taona nisesy ny aretin’ny homamiadana. Raha ny salanisan’ny OMS, manodidina ny 200.000 isan-taona ny olona voan’ny homamiadana maneran-tany.
Eto Madagasikara kosa, fantatra fa manodidina ny 1500 isan-taona eo ny olona vaovao tratran’ny aretin’ny homamiadana tonga manatona toeram-pitsaboana. Misoko miadana araka ny anarany, ny aretina ka rehefa tonga amin’ny faratampony vao hita sy manaitra ny marary.
Azo tsaboina ihany anefa izy ireny raha voatily mialoha ka afaka ara-potoana tsara ny fakan’aretina, raha ny fanazavan’ny dokotera. Matetika anefa, efa tara loatra vao mahazo fitsaboana ny marary.
Amin’ny 8 marsa, Andron’ny vehivavy, mikarakara fitiliana maimaimpoana ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza ny JCI izay iarahana amin’ny HJRA. Mitohy hatramin’ny anio etsy amin’ny Centre Franco-malagasy ny fisoratana anarana ho an’ireo vehivavy liana ny hahafantatra ny toe-pahasalamany.
Anisan’ny homamiadana mpahazo ny vehivavy ny ao amin’ny nono sy ny vozon’ny trano-jaza ka izany indrindra no hanaovana ny hetsika, raha ny fanazavan’ny filohan’ny JCI Ilon’Iarivo 2016, Gaelle Pless. 300 ihany ireo andriambavilanitra hioilina maimaimpoana etsy amin’ny HJRA noho ny fitaovana voafetra ihany.
Mampatahotra ny Malagasy ny mahafantatra ny toe-pahasalamany indrindra ny hahafantatra ny fisian’ny homamiadana ao aminy. Voa avy hatrany ny saina satria aretina mahafaty haingana izany homamiadana izany ary lafobe ny fitsaboana.
Tsara anefa ny mahafantatra fa na misy ny aretina na tsia ao anatin’ny vatana hahafahana mitsabo ara-potoana, raha ny fanazavan’ny profesora Léontine.